Maraykanka, 18 January 2014
Sabti 18 January 2014
Obama: NSA waa la xakamaynayaa
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in dib u eegis iyo dib u habayn lagu samaynayo hanaanka dabagalka ee wakaaladda Nabadsugidda ee maraykanka ee NSA .
VOA oo Wareysatey Jilaaga Barkhad Cabdinaasir
Barkhad Cabdinaasir, Jilaaga filimka Captain Phillips ee kusaabsanaa burcad baddeedda Soomaaliya ayaa u sharaxan abaalmarinta caalamiga ah ee Oscar ee uu Hollywood ku bixiyo.
Qatar Dhinaca Biyaha ah oo ka Taagan West Virginia
Gobolka West Virginia ee Maraykanka ayay soo food saartay khatar caafimaad oo la shegay inay ka dhalan karto biyaha webiga oo sumoobay, oo ay ku daadatay Chemical wax yeeli karta caafimaadka noolaha kala duwan ee ay gaadho.
USA: Ciidan ayaa Naga Jooga Soomaaliya
Dawladda Maraykanka ayaa markii ugu horraysay qiratay in unug yar oo ciidan ah uu ka joogo Soomaaliya, Maraykanku wuxuu sheegay in ciidankan halkaasi loo geeyay si ay u taageeraan ciidanka Soomaalida iyo kuwa AMISOM.
Afar Soomaali ah oo ku Dhintay Maraykanka
Afar qof oo Soomaali ah oo saddex ka mid ah ay dumar yihiin ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay gobolka Iowa ee dalkan Maraykanka.
Muranka Diblomaasi ee Maraykanka iyo India
Diblomaasi reer India ah oo lagu magacaabo Devyani Khobragade ayaa la amray inay ka baxdo dalka Maraykanka ka dib markii lagu eedeeyey inay been ka sheegtay codsi dal-ku-gal
Qabow ba'an ayaa ka jira gobollo badan oo ku yaalla dalkan Maraykanka. Kumanaan dugsi oo ku yaalla gobolada bari iyo kuwa koonfureed ayaa qabowga dartiis la xiray.
MN: Meydka Hal Qof oo laga Helay Dhismihii Gubtay
Dab weyn oo toddobaadkan ka kacay dhisme ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka MN ayaa lagu soo waramayaa in hal qof oo meyd ah laga soo saaray qeybihii gubtay ee dhismaha.